काठमाडौं : शाइन रेसुंगा, पूर्णिमा र भार्गव विकास बैंकले शुक्रबार (असार २७ गते) एकै दिन विशेष साधारण सभा बोलाएका छन् । शाइनले पूर्णिमा र भार्गवलाई एक्वायर गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न तीन वटै बैंकले असार २७ गते विशेष सभा बोलाएका हुन् । एक्विजिसन प्रयोजनका लागि लेखापरीक्षकले तयार गरेको सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा त्यसका आधारमा निर्धारण भएको सेयर स्वाप रेसियो पारित गर्ने मुख्य एजेन्डा सभामा पेश हुनेछ ।
यता, शाइन रेसुंगाले भने सभा प्रयोजनका लागि असार १९ गतेदेखि बुक क्लोज गरेको छ । असार १८ गतेसम्म कायम रहने सेयरधनी मात्र सभामा भाग लिन सक्नेछन् ।
सुनको भाउमा फेरि रेकर्ड ब्रेक, तोलाको ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुग्यो
आँधिखोला लघुवित्तको सेयर कारोबार खुला, कति पायो ओपन रेन्ज ?
आइसीएफसी फाइनान्सले ऋणपत्रमा १२% ब्याज दिने, २० करोडको आउँदै
सिद्धार्थ बैंकको ऋणपत्र बिकेन, अब भदौ १९ गतेसम्म म्याद
सिर्जना फाइनान्सको ६०% हकप्रद दाबी गर्न कहिलेसम्म बन्ने सेयरधनी ?
वोमी लघुवित्तको १००% हकप्रदमा आवेदन दिन अब कति समय बाँकी ?